Home Wararka Deni oo isku dayay inuu warbaahinta Puntland ka joojiyo wararka A. Karaash
Deni oo isku dayay inuu warbaahinta Puntland ka joojiyo wararka A. Karaash
Madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa shalay booqday xarunta dhexe ee Telefishinka iyo Raadiyaha dowladda. Madaxweyne ku xigeenka ayaa kormeer ku sameeyay qaybaha kala duwan ee Telefishinka iyo Raadiyaha dowladda.
Intaas kadib Kulan gaar ah ayuu la yeeshay Agaasinka Warbaahinta dowladda oo uu kala hadlay arrima la xiriira baahinta wararka xafiisyada kala duwan ee dowladda Puntland.
Saciid Deni ayaa maalintii uu soo baxayay si gaara ugu wargaliyay agaasinka warbaahinta Puntland inay marnaba sii deynin hadalada, amarada ama wararka quseeya madaxweynaha ku xigeenka Puntland.
Warar lagu kalsoonyahay ayaa sheegaya in Axmed Karaash uu Agaasinka warbaahinta dowladda su’aalo ka weydiiyay sababta loo baahin waayay wararkii u danbeeyay ee Xafiiskiisa ka soo baxay.
Agaasinka ayaa sida la xaqiijjiyay ka cudur-daartay arrintaas islamarkaana caddeeyay in warbaahinta dowladda ay u siman yihiin mas’uuliyiinta dowladdu oo aysan jirin cid gaar loogu adeego. Maamulka warbaahinta dowladda ayaa sidoo kale sheegay in aysan marna kala xigsan doonin xafiisyada iyo madaxda Puntland.
Xogta ayaa intaas ku daraysa in mas’uuliyiinta Warbaahinta dowladdu ay aqbaleen in ay baahiyaan war kasta oo uu soo saaro Madaxweyne ku xigeenka.
Previous articleATMIS oo Bandow kusoo rogtay Xalane Xilliga Doorashada Guddoonka Baarlamaanka
Next articleQarax Muqdisho lagula beegsaday sarkaal CXD iyo khasaare ka dhashay
La taliyaha MW Farmaajo oo sheegay in dowlada Qatar ay mas’uul...
Goobaha Ganacsiga ee magaalada Jowhar oo maanta xiran